सिरहाका ४ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको भरमा चल्दै ! - हाम्रो जनकपुर
आफ्नै श्रीमानलाई विष खुवाएर हत्या आरोपमा श्रिमति पक्राउ
सिरहाका ४ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको भरमा चल्दै !
२०७७ चैत्र २२, आईतवार ०७:२७
धर्मेन्द्र पासवान/ सिरहा । सिरहाका ४ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको भरमा चल्दै आइरहेका छन्। जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको सिरहा नगरपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका र औरही गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतले हाँकिरहेका छन्।
ती तिनटै नगरपालिकामा प्रशासनको उप– सचिवको दरबन्दी कायम रहेको भएपनि सिरहामा प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत, कर्जन्हामा स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत र कल्याणपुरमा शिक्षा सेवाका अधिकृतले नै प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार गर्दै आइरहेका छन्। भने औरही गाउँपालिकामा प्रशासनको अधिकृतको दरबन्दी कायम रहेका भएपनि त्यहाँ पशु शाखा संयोजकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका हुन्। औरही गाउँपालिकामा प्रशानिक जिम्मेवारी दिइएको भए पनि आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार भने दिइएको छैन ।